BASBAAS OO LAGU KORIYO: BEERITAANKA, BEERASHADA, IYO SIDA LOO HABBOONEEYO BIYAHA IYO DARYEELKA? - SOOSAARKA DALAGGA
Beeridda beerfogan oo wax ku ool ah ee lagu koriyo: beerashada iyo daryeelka
Greenhouse - meesha ugu haboon ee loogu talagalay basbaaska sii kordhaya. Waxaa ku jira iyada oo suurtogal ah in la abuuro shuruudo wanaagsan oo lagu helo goosashada qani ku ah.
Bal aynu eegno dhammaan waxyaalihii basbaas: beerashada iyo daryeelka ee aqalka dhirta lagu koriyo, taatikada koritaanka iyo helitaanka dalag aad u fiican.
Maxaa loo beerayaa?
Xulashada fasalka waa mid ka mid ah muhiim ah xaaladaha beerashada dhaqanka ee xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo. Dhammaan noocyada oo dhan kuma habboona dhul daboolan. Guusha si guul leh koray koriyo Beelaha, maadaama ay aad ugu adkeysanayaan cudurada, is-iskuday iyo aan qabyo ahayn. Isla mar ahaantaana, waxaa lagu gartaa wax-soosaarkooda sare.
Noocyo la xaqiijiyay oo kala duwan Alesya, Kubik, Golden, Troika, Othello, Victoria, Dareenka. Wixii basbaas cusub muddo dheer waxay ka fiican tahay in la beero noocyo kala duwan oo taariikhda maturity.
On our site waxaad ka baran kartaa noocyo kale oo basbaas: Chile, Cayenne, basbaaska-digir cagaaran, basbaaska cad-peas, Jalapeno, Atlas, Habanero.
Xeerarka u diyaargaraynta abuurista
Goorta la beerayo basbaaska aqalka dhirta lagu koriyo? Beeridda waxaa lagu fuliyaa badhtamaha Febraayo - horraantii Maarso. Dalaggaani wuxuu leeyahay xilliga ugu koraya ee xilliga sii kordhaya inta lagu jiro xilliga sii kordhaya, sidaa daraadeed waxay bilaabaan inay beeraan wax badan oo ka horeeya khudaarta kale.
Sawirada ama koobabka waxaa loo diyaariyaa beeridda. Hal degaan oo ku jira weel gaar ah ayaa la doorbidi karaa, maadaama nidaamka xididku uu daciif yahay mana u dulqaadanayo beerka. Haddii aad ku beerato sanduuq caadi ah, ka dib marka dhismaha labo caleemo, waxaad u baahan tahay inaad soo saarto qaadashada.
Seeds waxaa lagu buufin karaa kowar dhibcood hal boqolkiiba. Kansar dhalaanka 30 daqiiqo, ka dibna ku duudduubtay maro jilicsan. 4-5 maalmood ka dib, miraha waxaa la dhigaa isku dar ah ciid, dhulka iyo humus. Weelasha waxaa lagu daboolaa foorno oo lagu rido kuleylka.
Haddii aqalka dhirta lagu koriyo waxaa la kariyaa, geedo si toos ah loogu beeray. Waa mid casri ah oo casri ah blocks of microwavesdhawaan ayaa lagu soo bandhigay iibka. Xaglaha xaaladdahan waxay ku jiraan qolofka shakhsi ahaaneed, oo leh sifooyin gaar ah oo go'doomin ah oo ka yimaada saameynta deegaanka dibadda.
Qaabka hababka dhaqameed badan ayaa loo qori karaa digirta peat. Marka transplanted dhulka, geedka laguma soo saaro, taas oo macnaheedu yahay in xididada aan dhaawacan. Waxaa sidoo kale jira hab lagu korayo bacaha bacaha ah ee buuxiyey dhulka.
In wajiga laba caleemo, geedo waxaa la quudin jiray Bacriminta macdanta. Quudinta labaad waxaa la sameeyaa 20 maalmood kadib.
Marka sprouts ay gaaraan 15 cm, waxay jiidayaan burooyinkooda sare. Ka dib markaa, baadiyaha waxay bilaabmaysaa laanteeda sababta oo ah sameynta caleemaha lateral.
Xaaladda lagama maarmaanka ah ee geedo sii kordhaya waa ay adkeynta. Xilliga cimilada diiran, waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah u qaadatid dibadda oo aad ku hayso hooska, oo laga xiro qoraalada.
Marka lagu koriyo aqalka dhirta lagu koriyo, waxaad u baahan tahay joogto ah diyaarinta inta lagu jiro maalinta.
Pepper wuxuu dalbanayaa marka la eego nafaqada iyo dabacsanaanta. Waxay horay u diyaariyaan ciidda si hore, qodo, ku dar humus ama compost, phosphate potassium Bacriminta.
MUHIIM. Laba toddobaad ka hor transplanting, si toos ah ugu rid aqalka dhirta lagu koriyo si loo bedbaadiyo.
Waqtiga beerto waxay ku xiran tahay heerkulka hawada iyo heerka diyaargarowga dhirta. Geedo waa in ay ahaataa ugu yaraan 60 maalmood jir, dhererka duurka waa inay ahaataa 25 cm. Dhirta caafimaad leh, diyaarisay geedo waxay leeyihiin dhumuc qaro weyn, caleemo cad oo xitaa midab leh. Heerkulka hawada ee aqalka dhirta lagu koriyo waa inuu ahaadaa ugu yaraan 16 digrii habeenkii.
Cufnaanta beerto waxay ku xiran tahay darajada. Faafidda, sare u beeray fogaan ah 35-40 cm midba midka kale, iyo gaaban, is dhejin - at 20-30 cm. gebi ahaanba Nidaamka xididka.
Ugu yaraan laba litir oo biyo ah ayaa lagu shubay ceel kasta, ka dibna baadiyaha ayaa la dhigayaa, iyada oo aan qoto dheereynin heerkii hore ee uu koray. Dhulka dhulku wuu yaraa, la waraabiyaa, oo la dubay, humus ama peat si aanay u dillaacin.
MUHIIM. Ha ku deynin maalin kulul, waxaa fiican inaad dib u dhigto habka fiidkii.
Pepper waa dhaqan diimeed, sidaas darteed hubso in aysan jirin wax isbeddel ah heerkulka inta lagu jiro beerashada. Ugu fiican waa 23-250. Haddii aqalka dhirta lagu koriyo uu aad u kulul yahay, dhirta ayaa laga yaabaa inay bilaabaan ubaxyo.
Xaalad kale waa sax. Sidee loo siiyaa basbaaska aqalka dhirta lagu koriyo? Haddii qoyaanka aysan ku filnayn, dhirta ayaa bilaabi doonta in ay gubaan, dhibco jaale ah ayaa ka muuqan doona caleemaha. Laakiin ha u dulqaadan carrada, haddii kale fangaska ayaa bilaabi doona inuu horumariyo.
Ku waraabinta basbaas waa inuu ahaado asalka biyaha diirran. In kulaylka duurka u buufiyey si loo ilaaliyo qoyaan, kaas oo lagu hayo 60%.
Maqsalladu waxay u baahan yihiin inay si joogto ah u xoqaan, taas oo ah, in laga saaro caleemaha xad-dhaaf ah. Warshadu waxay baxaysaa labada jir ee ugu xoogan, intiisa kale waa la jaraa. Intaa waxaa dheer, dhammaan caleemaha oo aan lahayn ubax iyo caleenta xad-dhaaf ah ayaa si joogto ah loo xiraa.
Noocyada tallaabada ah waa in lagu xiraa lowska ama trellis.
Si taxadar leh uga saar caws. Haddii aan la sameynin, basbaaska waa la daadin doonaa, dhalatada ayaa hoos u dhigi doonta.
TALO. Wuxuu ka caawiyaa dagaalka cawska. Canaanku ma koro mulch.
Pepper waxay u baahan tahay quudin toddobaadle ah. Halabuurka Bacriminta waxay ku xiran tahay da'da dhirta. Bilowga bilowga beerista nitrogen-ka ayaa ku badan. Qodobka nitrogen ee dharkiisa ayaa hoos u dhigtay samaynta burooyinkeeda iyo miraha. Waqtigan, dhaqanka u baahan tahay fosfooraska iyo potassium.
Tallaabo muhiim ah oo ka mid ah basbaas sii kordhaya ee lagu koriyo waa ay difaaca ka soo cayayaanka iyo cudurrada.
Cudurada la xidhiidha jebinta xeerarka daryeelka. Inta badan dhaqanku wuxuu saameeyaa:
Lugta madow. Fungus infakshanka xididka iyo asliga ah marka ciidda ay ka weyn tahay wetted oo isku dhafan oo leh heerkul hooseeya. Fangaskaan wuxuu ku faafaa xawaare sarreeya, wuxuu ku dhacaa ciidda oo dhan. Waxay la dagaallameen ka hor jeermiska ka hor laga beerto ee lagu koriyo. Haddii dhirta qaarkeed aad aragto calaamadaha, waa inaad si deg deg ah uga saartaa geedaha cudurka qabta iyo habka intiisa kale. fungicide. Waxa kale oo ay mudan tahay in la yareeyo waraabinta biyaha.
Bakteeriyadu waxay ku jirtaa. Waxay saameeysaa asliga ah iyo caleemaha, waxaa jira dhibco badan. Miro ayaa ku dhacda inta lagu guda jiro fruiting, dhibco biyo ayaa u muuqda, waxayna luminayaan bandhigtooda iyo dhadhaminayaan.
Dheecaan danbe. Hoggaamiya si ay u miiraan miro. Horumarinta horumarinta qoyaan xad dhaaf ah. Cudurku wuxuu dhici karaa sababtoo ah infakshanka abuurka, sidaas darteed waxay u baahan yihiin in si fiican loo daaweeyo kahor intaan beeran.
Stolbur. Cudurka cudurku waa cayayaanka. Geedaha waxay bilaabaan inay huruud noqdaan oo qallalaan. Haddii uu calaamaduhu dhaco, isticmaal daroogo. Farmad, Actellic, Phytoplasmin. Ka saar haramaha xilliga.
Cladosporiosis. Caleemaha waxaa lagu daboolay dhibco iftiin leh, ugxan-yari ayaa dhacaya. Daaweynta cudurka sulfate copper.
TALO. Infakshin kasta way ka fudud tahay ka hortagga daaweynta. Sidaa darteed, waqti ku bixiso jeermiska ee lagu koriyo iyo geeddi socodka abuur ah ka hor beerto. Isla markiiba ka saar dhirta leh calaamadaha cudurka.
Marka laga soo tago cudurka, basbaas badanaa wuu ka jiraa cayayaanka:
Kuwa ugu caansan waa aphid. Waxay ku dabooshaa caleemaha leh haraaga dabiiciga ah waxayna keenaysaa inay cufaan. Cayayaanka ayaa ka hortagi kara cayayaanka faleebo ee basasha iyo toonta.
Slugs. Beerta rusheeyaa waxay caawisaa inay la dagaalanto basbaas cas, lime.
Muuqaalka muuqaalka caleenta lakabka cad ee cadaanka ah ayaa muujinaya caabuq caarada caarada. Burburin Carbofos, Aktely, Fufanon.
Qaar ka mid ah siraha
Waxaa jira waxyaalo qaar ka mid ah beerista dalaggan, si ay u kordhiyaan dhalidda.
Isu ururi miraha la abuuray waqtigooda. Haddii mid la kobcayo, ka saar si dadka kale ay u bilaabaan bisil.
Si joogta ah uga soo saar qalabka aan qallalan lahayn. Inkastoo ay ku jiraan duurka, dhirta waxaa lagu qasbay inay xoog ku qaadato iyaga.
Ka dawee duurka ugxan ugxan si aad u kiciso samaynta miro.
MUHIIM. Ha beeran tiro ka mid ah basbaas macaan iyo qadhaadh ah. Self-fertility ee dhirta this keeni doonaa xaqiiqda ah in dhammaan basbaas ay noqon doonto qadhaadh.
Miraha bislaado waa in laga saaraa duurka si haboon, sida ugu dhakhsaha badan ay u heleen dabeecada midabka ee noocyo gaar ah. Ha uga tegin duurka, si ay u ilaaliyaan halkaa. Tani waxay si tartiib ah hoos u dhigeysaa koriinka intiisa kale.
Si aan u dhaawacin caleemaha, miraha waxaa si taxadar leh looga jaray maqaarka ama mindi fiiqan. Nuqullada ugu wanaagsan waa in laga tago miraha.
MUHIIM. Ma aha lagama maarmaan in la soo ururiyo miraha laga bilaabo bacriminta, sababtoo ah maaddada laga helay iyaga ma ilaalinayso sifaha geedka hooyada, mustaqbalkana waxaad ka heli doontaa wax aad uga duwan wixii aad filaysay, ama ma sugi doontid goosashada dhan.
Nuqul ka mid ah noocyada kala duwan ee loo jecel yahay waxaa laga doortaa heerka saddexaad ee hoose. Miro loogu talagalay in la faafiyo waxaa ka tagay baadiyaha, halka ugxan-soo-baxyada haray laga saaro. Kuurku waa inuu ku qaataa dhammaan xoogagga midhahaas oo aad rabto in aad soo ururiso abuurka.
Miro macaan oo buuxda ayaa laga saaraa oo lagu dhejiyaa bac qalajinta. Hubso in bacda gebi ahaan qalalan tahay. Miro la qalajiyey waa la jaraa, miraha waxaa laga soo saaraa, la qalajiyey todobaad kale oo ku rid bac warqad qallalan.
Xayeysiiska ku qor magaca noocyada kala duwan iyo wakhtiga goosashada miraha. Waxyaabaha wejiga ah ayaa badbaadin doona saddex sano.
Siraha ee goosashada hore
Celcelis ahaan, heerkulka ugu fiican ee lagu koriyo ah loogu talagalay beerista basbaas waxaa la gaarey badhtamaha May. Laakiin waxaa jira hab lagu kicin karo kuleylka iyada oo sameysma sariir diiran. Tani, 50 cm sare oo sare ee ciidda ayaa laga saaraa sariiraha.
Qeybta hoose ee qashinka waxaa la dhigaa lakab digo oo lagu qasi karo caws. Dhulka waxaa lagu dejin doonaa onkod iyo wixii aad beerta ka soo baxday oo dhan. Waxaad yeelan doontaa tuulo aad ku daadato biyo kulul. Tani "sandwich"Iska ilaali carrada oo bilowda kuleylka hawada."
Madaarka waxaa lagu beeray beerta noocan oo kale ah horaantii bishii Abriil, halkaa oo dhan bilawday bil ka hor sidii caadiga ahayd, badhtamaha Janaayo. Dhamaadka bisha May waxaad heli doontaa midhaha ugu horeysa.
Haddii barafku si lama filaan ah u bilaabmaa, sariirta gudaha aqalka dhirta lagu koriyo waxaa lagu daboolaa koronto dheeraada. Sida hoyga laba-laabka ah, basbaasku ma xakamayn doono oo wuu sii wadi doonaa inuu koro.
Self-pollination basbaas - ballaaran ballaaran ee ninkii beerta ka shaqaynayay. Waxaad noqon kartaa mid breeder dhab ah, oo aad u hesho kala duwanaantaada adigoo goynaya noocyada aad jeceshahay. Qaado buraash jilicsan, ka qaado mammuulka hal kaynta oo ku rid ubaxyada kale. Badbaadi midhaha soo baxa, ka soo qaado miraha ka soo baxa.
Iyadoo la tixgelinayo dhammaan nuucyada iyo u hoggaansamida sharciyada kor u kaca ee ku yaala aqalka dhirta lagu koriyo waa dammaanad joogto ah oo soo saarkeedu sarreeyo dalaggaan.
Gacaliye qaali ah! Ka tag faallooyin iyo talooyin ku saabsan basbaaska sii kordhaya ee lagu koriyo
Caanaha yaryar ee yaryar oo leh dalag badan - noocyo kala duwan oo yaanyo ah "De Barao Tsarsky"
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan digaagga
Khudaar cagaaran oo casaan ah: dabeecadaha kala duwan iyo beerista agrotechnology
Sida loo abuuro oo loo daryeelo digirta beerta
Arjiga, bogsashada guryaha iyo waxyeellada Scorzoner
Koraaya geedo basbaas
Cudurka iyo afka afka
Daryeelka cherry ee macaan
Maanta, barafka la yiraahdo, oo la abuuray thanks to beerto geedaha qurxinta kala duwan, ayaa ah kuwo aad u badan oo ka badan goobaha ganacsiga gaarka loo leeyahay. Dad badan ayaa adeegsada canabkiinna, taas oo ayadoo la adeegsanaayo taageerooyinka gaarka ah waxay kor u qaadaan dhererka dhowr mitir oo isla markaasna leh ubaxyo ku farxiya milkiilayaasha bil kasta. Read More
"Heer sare iyo sare": Ruushka, ayaa la filayaa in qiimaha raashinka laga boodo
Boqoradda xilliga dayrta: qaababka kala duwan ee dabacasaha